IsiCoco seCartridge abavelisi kunye nabaxhasi - China Isicoci seCartridge seCartridge
Ukuhamba okuPhezulu kweCartridge yokuCoca
I-PVDF icoca icartridge
ICartridge yokuCoca iHydrophilic PTFE
ICartridge yeHydrophobic yokucoca ulwelo
PP (ezinepolypropylene) iCartridge lokucoca ulwelo
I-PES (Poly Ether Sulphone) yokuCoca iCartridge
Inayiloni elicociweyo iCartridge lokucoca ulwelo
Iikhatriji zokucoca ulusu ezibhonjiweyo
Glass Firber ndizayo iCartridge iCartridge
Ekhaya Stainless lokucoca ulwelo
flow eliphezulu iCartridge lokucoca ulwelo
Icwecwe lokucoca iTitanium
ICarbon filter cartridge
Iikhatriji ze-YCF zenziwe nge-hydrophilic polyvinylidene fluoride PVDF membrane, umbandela unentsebenzo elungileyo yokumelana nobushushu kwaye unokusetyenziswa ixesha elide kwi-80 ° C-90 ° C. I-PVDF ineprotein ephantsi yokusebenza kwe-adsorption kwaye kufanelekile kwisisombululo sezondlo, iiarhente zebhayoloji, ukuhluza izitofu ezingenazintsholongwane. Kwangelo xesha, inendawo yokusebenza kwezulu ephantsi kunye nokuhambelana kwemichiza kwindalo yonke.
I-YWF yeekhatriji zeefilitha zeefilitha zemithombo yeendaba yimbumba ye-hydrophilic PTFE, ekwazi ukucoca isisombululo se-polar solvent. Zinokuhambelana kweekhemikhali kwindalo iphela, esebenzayo ekucoceni inzala kwezinyibilikisi ezinje ngee-alcohols, iitoni kunye neeesters. Okwangoku, zisetyenziswa ngokubanzi ekhemesti, ekutyeni, kumzi mveliso weekhemikhali nakwizinto zombane. Iikhatriji ze-YWF zibonisa ukumelana nobushushu okugqwesileyo, zinokusetyenziswa ngokuphindaphindiweyo kwi-sterilization ye-intanethi okanye ukubulala iintsholongwane kuxinzelelo oluphezulu. Iikhatriji ze-YWF zikwanokusebenza okuphezulu ekucengeni, isiqinisekiso esiphakamileyo, kunye nobomi benkonzo ende.
I-NWF yeekhatriji zecrafti yemithombo yeendaba yimbumba ye-hydrophobic PTFE, esebenzayo ekucoceni kwangaphambili nasekucociseni igesi kunye nokunyibilikisa. Inwebu ye-PTFE ine-hydrophobicity eyomeleleyo, amandla ayo okhukuliseko lokukhula kwamanzi angama-3.75 anamandla kune-PVDF yesiqhelo, ke iyasebenza ekucoceni irhasi kunye nokuhluza ngokuchanekileyo kunye nokuzinziswa kokunyibilikisa, zisetyenziswa kakhulu ekhemesti, ukutya, ishishini lamachiza, kunye nakwizinto zombane. Iikhatriji ze-NWF zibonisa ukumelana nobushushu okugqwesileyo, zinokusetyenziswa ngokuphindaphindiweyo kwi-sterilization ye-intanethi okanye ukubulala iintsholongwane koxinzelelo oluphezulu. Ikwanokusebenza okuphezulu kokuthintela, isiqinisekiso esiphezulu, kunye nobomi benkonzo ende.
IColypropylene Yincindi yeCartridge
Iicolorropropylene zokucoca ulwelo zenziwe ngokuchanekileyo ukuze zisetyenziswe kwizicelo zokuhluza ezibaluleke kakhulu ngaphakathi kokutya, amayeza, ibiotech, ubisi, iziselo, ukusela, i-semiconductor, unyango lwamanzi kunye nezinye iinkqubo zokwenza imveliso.
Iicolorges zokucoca ulusu oludibeneyo zenziwe nge-100% yemicu ye-polypropylene. Iintsinga zidibene ngononophelo kunye ukwenza ubungakanani begradient yokwenyani ukusuka ngaphandle ukuya kumphezulu wangaphakathi. Iifilitha zecebo lokucoca ulwelo ziyafumaneka zombini kunye nangaphandle kwenguqulelo engundoqo. Ubume obuphezulu buhlala budibene naphantsi kweemeko ezinzima zokusebenza kwaye akukho fuduko lweendaba. Imicu ye-polypropylene iqhuma ngokuqhubekayo kumbindi obunjiweyo, ngaphandle kokubopha, i-resins okanye i-lubricants.
I-0.45micron pp membrane inwebu yeplastikhi yokucoca ulwelo kunyango lwamanzi
HFP series neekhatriji lokucoca ulwelo eendaba yenziwe thermal-ukutshiza enemingxuma PP ifayibha inwebu, ezifundisa ubungakanani ubumdaka ubambe ubungakanani ngaphezu neekhatriji eziqhelekileyo. I-pores yabo ye-hierarchical yenzelwe ukuba icoleke ngokuthe chu, ukuthintela umphezulu wecartridge ekubeni uvaleke kwaye wandise ubomi benkonzo yeekhatriji.
Iikhatriji zoluhlu lwe-SMS zenziwe nge-membrane ye-PES hydrophilic. Banokuhambelana kwemichiza kwindalo iphela, uluhlu lwe-PH 3 ~ 11. Zibonisa ukusebenza ngokukuko okuphezulu, isiqinisekiso esiphakamileyo, kunye nobomi benkonzo ende, esebenzayo kwikhemesti, ukutya, ishishini lamachiza, elektroniki, kunye nezinye iinkalo. Ngaphambi kokuziswa, i-cartridge nganye iye yafumana uvavanyo lwe-100% lokuthembeka, ukuqinisekisa ukusebenza kweefilitha zemveliso. Iikhatriji zeSMS ziyanyamezeleka ukuphindaphinda umphunga okwi-Intanethi okanye ukubulala iintsholongwane ngoxinzelelo oluphezulu.
ICartridge ePhethe iCartridge yeFowuni ephezulu
Iikhatriji zechungechunge lwe-HFS zenziwe nge-Dura ye-hydrophilic asymmetric sulfonated PES. Banokuhambelana kwemichiza kwindalo iphela, uluhlu lwe-PH 3 ~ 11. Zibonisa ukuphuma okukhulu, umthamo omkhulu wokubamba ubumdaka, kunye nobomi benkonzo ende, esebenzayo kwi-bio-pharmacy, ukutya kunye nesiselo kunye nebhiya, kunye nezinye iinkalo. Ngaphambi kokuziswa, i-cartridge nganye iye yafumana uvavanyo lwe-100% lokuthembeka, ukuqinisekisa ukusebenza kweefilitha zemveliso. Iikhatriji ze-HFS ziyanyamezeleka ukuphindaphinda umphunga okwi-Intanethi okanye ukubulala iintsholongwane ngoxinzelelo oluphezulu, ukuhlangabezana neemfuno ze-asepsis zenguqulo entsha ye-GMP.
0.22 micron pes membrane membrane pleated filter cartridge esetyenziselwa ukuhluza imichiza ekrwada
Iikhatriji zoluhlu lwe-NSS zenziwe ngochungechunge lweMicro hydrophilic asymmetric sulfonated PES. Banokuhambelana kwemichiza kwindalo iphela, uluhlu lwe-PH 3 ~ 11. Zibonisa ukuphuma okukhulu kunye nobomi benkonzo ende, esebenzayo kwi-bio-pharmacy kunye nezinye iinkalo. Ngaphambi kokuziswa, i-cartridge nganye iye yafumana uvavanyo lwe-100% lokuthembeka, ukuqinisekisa ukusebenza kweefilitha zemveliso. Iikhatriji ze-NSS ziyanyamezeleka ukuphindaphinda umphunga okwi-Intanethi okanye ukubulala iintsholongwane ngoxinzelelo oluphezulu, ukuhlangabezana neemfuno ze-asepsis zenguqulo entsha ye-GMP.
Iibhokisi zeekhatriji ze-EBM / EBN zenziwe ngenayiloni ye-hydrophilic N6 kunye ne-N66 membrane, kulula ukumanzisa, ngamandla aluqilima kunye nobulukhuni, ukunyibilika okuphantsi, ukusebenza kakuhle kokumelana nokunyibilika, kunye nokuhambelana kweekhemikhali kwindalo yonke, ngakumbi kufanelekile kwizinyibilikisi kunye nokulungiswa kwemichiza. .
I-PP yokunyibilikisa umoya iCartridge
Iifilitha ze-meltblown ze-PP zenziwe nge-100% ye-PP yefayibha egqibeleleyo ngokutshiza nge-thermal kunye nokubamba ngaphandle kokuncamathela kwemichiza. Imisonto ilandelwa ngokukhululekileyo njengoko oomatshini bejikeleza, ukwenza ubungakanani obunobumba obuncinci. Ulwakhiwo lwazo olucekeceke ngokuthe ngcembe lubonisa umohluko omncinci woxinzelelo, amandla okubamba ukungcola okuqinileyo, ukusebenza ngokukuko kweefilitha, kunye nobomi benkonzo ende. Iifilitha ze-meltblown ze-PP zinokuphelisa ngokufanelekileyo ii-solids ezinamileyo, amasuntswana, kunye nokuhambisa amanzi.
Olu luhlu lweekhatriji zeefilitha zenziwe ngefayibha yeglasi eqaqambileyo, ebonisa umthamo wokugcina ubumdaka obuphezulu kakhulu, osebenza ekucoceni kwangaphambili kweegesi kunye nolwelo. Ngenxa yesakhono sokufakwa kweprotein ye-ultralow, zikwasetyenziswa ngokubanzi kwi-bio-pharmacy.